Iintlanzi ezisengozini yokuphela | Ngeentlanzi
Iintlanzi ezisengozini yokuphela (II)
Maria | | Izifo zentlanzi
Siza kuqhubeka nokuthetha ye iintlobo ezahlukeneyo zeentlanzi abasemngciphekweni wokuphela.
Ikati enkulu enkulu
Intlanzi enkulu o Pangasianodon gigas Olunye uhlobo olusemngciphekweni, ngokufanayo kunokubonwa eThailand, kuye kwabhengezwa njengezilwanyana ezisengozini yokuphela ngenyanga kaMeyi 1970.
Usenokubona ezinye iisampulu kuMlambo iMekong. Yeyona ntlanzi inkulu yamanzi amnandi ehlabathini, ifikelela kwiimitha ezi-3 ubude kwaye inobunzima obumalunga ne-300 kilos. Oko kwakhiwa idama lokuphehla umbane kwiMekong ngo-1994 abemi behlile ukusuka kwi-256 ukuya kwi-96 yeentlanzi.
El Uhlobo lweRhincodon Ifikelela kwiimitha ezili-12 ubude. Okwangoku ayaziwa ncam ukuba leliphi inani lookrebe abamhlophe abahlala emhlabeni. Into eyaziwayo kukuba kule minyaka ilishumi idlulileyo inani leesampulu lehle ngokukodwa ngenxa yokuloba ngokugqithileyo.
Ukuba igama lenzululwazi ngu I-Oncorhynchus tshawytscha. Olu hlobo lwalubaluleke kakhulu kwinkcubeko yamaIndiya aseMelika. Kumaxesha akutshanje kuyaziwa ukuba inani labo lehlile ngokuncamisileyo, kwaye basenokubonakala kwingingqi ye-Pacific Northwest e-United States.
Kude kube kungekudala, iisampulu ezingama-45 zeekhilos kodwa zinokubanjwa. Ngo-1998 kwabalwa iintlanzi ezingama-5 2016 kuphela kuMlambo iinyoka. Kuqikelelwa ukuba ezi ntlobo, ukuba kuthathwe amanyathelo abukhali, ziyakunyamalala ngo-XNUMX.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Iintlanzi ezisengozini yokuphela
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izifo zentlanzi » Iintlanzi ezisengozini yokuphela (II)
Indlela i-seilfish edada ngayo
Iintlanzi zenza izilwanyana zasekhaya ezibalaseleyo zabantwana